နယူး Execution ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနပြလာခြင်း 10 အမေရိကန်လူသတ်မှု Kill မိနစ် - သတင်း Rule
သေဒဏ် (ဓာတ်ပုံအကြွေး: ဝီကီ​​ပီးဒီးယား)
ဤသည်နိုဝင်ဘာလ 30, 2009 ဓာတ်ပုံ၏ကွပ်မျက်အခန်းထဲကပြသထားတယ် “သေဆုံးအိမ်သူအိမ်သား” Lucasville အတွက်တောင်ပိုင်းအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပွုပွငျ Facility မှာ, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်
အမေရိကန်လူသတ်မှာအနည်းဆုံးများအတွက်ရုန်းကန်နှင့်လေကြောင်းအဘို့အ gasped 10 သူတစ်ဦးအငြင်းပွားဖွယ်အသစ်မူးယစ်ကော့တေးသုံးပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာကွပ်မျက်အတွက်အသေသတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်အဖြစ်မိနစ်, မျက်မြင်သက်သေများအဆိုအရသိရသည်.
53 နှစ်အရွယ် Dennis McGuire ၏သေဒဏ်စီရင်မှာကိုလံဘတ်စ Dispatch သတင်းစာပစ္စုပ္ပန်များအတွက်တစ်ဦးကသတင်းစာဆရာအအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်လူသတ်သမားကိုဖန်ဆင်းကြောင်းအစီရင်ခံ “snorting နှင့်မွန်းကျပ်” သူမလွန်ဆန်နိုင်အဖြစ်အသံ.
အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အရာရှိများကြောင့် McGuire ကအေအက်ဖ်ပီကိုပြောသည်, အတွက်သေဒဏ် 1989 လူငယ်တစ်ဦးကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမများ၏မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းနှင့်လူသတ်မှုများအတွက်, မှာသေဆုံးကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် 10:53 နံနက် (1553 ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်).
ကွပ်မျက်မျက်မြင်သောသူဂျာနယ်လစ်များအသေစေလောက်ဆေးထိုးမှာအသုံးပြုတဲ့ဆေးအုပ်ချုပ်ခွင့်ခံရဖို့စတင်နေပြီခဲ့ဟုဆိုသည် 24 မိနစ်အစောပိုင်းက Lucasville အတွက်အကျဉ်းထောင်မှာ.
အသစ်တစ်ခုကိုအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် protocol ကိုလက်အောက်တွင်, McGuire ကိုသက်သာစေသောဆေး midazolam နှင့် analgesic hydromorphone ပါဝင်သောကော့တေးသုံးပြီးကွပ်မျက်ခံရခဲ့သည်, ယခင်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အသုံးပြုဘယ်တော့မှပေါင်းစပ်.
အသစ်ကွပ်မျက် protocol ကိုအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြီးနောက်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နှင့်သေဒဏ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်သောအခြားအမေရိကန်ပြည်နယ်များဥရောပထုတ်လုပ်သူသူတို့ကိုထောက်ပံ့ရပ်တန့်သောအခါအ barbiturates ထဲက run နေစတင်ခဲ့.
McGuire ရဲ့ရှေ့နေများကသေဒဏ်စီရင်၏ method ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့, လူသတ်သမားအဖြစ်လူသိများနေတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းအတွက်အသက်ရှုမွန်းကြပ်သေမယ်လို့တျောသညျ “လေထုငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု,” အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရတားမြစ်သည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောပြစ်ဒဏ်၏မျိုးထိမှန်.
သို့သော်အယူခံ, အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်မှလူအပေါင်းတို့သည်သွားလေ၏သော, ပယ်ချခဲ့ကြသည်.
အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အတွက်တစ်ဦးကဖက်ဒရယ်တရားသူကြီး, ဂရက်ဂိုရီ Frost က, ကပြောပါတယ် “တရားရုံးရှေ့တော်၌ထိုအထောက်အထား McGuire ပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားရလိမ့်မည်ဟုသိသိသာသာအန္တရာယ်တင်ဆက်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။”
ကြာသပတေးနေ့ရဲ့ကွပ်မျက်မျက်မြင်သောသူဂျာနယ်လစ်များကသူသေသတ်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ် McGuire suffocating ခံရဖို့ပေါ်ထွန်းသောကပြောပါတယ်.
သတင်းထောက်တွေကို၏ရေကူးကန်၏အဆိုအရ, ကအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် Re-မိတ်ဆက်သေဒဏ်ထဲမှာကတည်းကအရှည်ဆုံးကွပ်မျက်ခဲ့သည် 1999.
“အကြောင်းမှာ 10:33 နံနက်, McGuire လေထုအဘို့ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ရုန်းကန်နေနှင့် gasping စတင်, အနညျးဆုံးအဘို့ကြာမြင့်ကြောင်းအသံ snorting အောင်နှင့်မွန်းကျပ် 10 မိနစ်, မိမိအရင်ဘတ်လှူနဲ့သူ့လက်သီး clenched နှင့်အတူ,” အကိုလံဘတ် Dispatch ဖော်ပြခဲ့သည်.
“နက်သော, လမ်းပေါ်မှာအသံသည်မိမိနှုတ်ကနေ emanated. သူသေဆုံးအသံထွက်ခဲ့သည်ရှေ့တော်၌ထိုနောက်ဆုံးအများအပြားအချိန်လေးများအတွက်, သူဆဲပဲ။”
သေဒဏ်ကျွမ်းကျင်သူများက McGuire ရဲ့သေမင်း၏အသေးစိတျမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုထုတ်ဖော်, ကဖြစ်သည့်သေဒဏ်စီရင်တဲ့နည်းလမ်းမှထောက်ပြခဲ့သည်ဟုဆို “ကမ်းအကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်ပြဿနာ။”
“အလျား၏အလငျး၌နှင့် Dennis McGuire ရဲ့ကွပ်မျက်၏စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖော်ပြချက်, အခြားပြည်နယ်များအတွက်ဖော်ပြခဲ့သည်သေစေလောက်ဆေးထိုးပြဿနာများ၏အကွာအဝေးအပြင်, ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံရဲ့သေစေလောက်ဆေးထိုးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကအစဉ်အဆက်ခဲ့ထက်ပိုကမ်းအကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်ပြဿနာကြောင်းပုံပေါ်,” ဒေဗောရ Denno, ပညတ်တရား၏ Fordham တက္ကသိုလ်မှ School မှ, အီးမေးလ်ကအေအက်ဖ်ပီကိုပြောသည်.
မာယာ Foa, အ Reprieve non-profit အုပ်စုမှာသေဒဏ်အဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူး, ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးချက်ကိုလျစ်လျူရှု၏အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အာဏာပိုင်များစွပ်စွဲ.
“အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ကဒီလမ်းအတွက်လူအပေါ်စမ်းသပ်သူတို့ကိုလေးနက်သောဆငျးရဲဒုက်ခဖြစ်စေတဲ့စွန့ကြောင်းဦးဆောင်ကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်သတိပေးခဲ့သည်ခဲ့သည်, နှင့်သက်သေအထောက်အထားများဒီထွက်ဘွားမြင်ပြီအကြံပြု,” Foa ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်.
“ကျွန်တော်တို့အာဏာ guinea ဝက်အဖြစ်လူသားမြားသသုံးပြီးရပ်တန့်မီကကြည့်ဖို့ဘယ်နှစ်ယောက်ပိုပြီး botched ကွပ်မျက်လိုအပ်ပါဘူး?”
ဇန္နဝါရီလတွင်9in Oklahoma, condemned killer Michael Lee Wilson said he could feel his “whole body burning” as he was put to death.
သို့သော်, these kinds of drugs are now only produced by pharmacies that are governed by local laws, rather than federal regulators.
McGuire is the third man to be executed in the United States this year. Ohio executed three of the 39 people put to death in the United States last year, ထိုအရသိရသည် Death Penalty Information Center.
ဤဆောင်ပါး, New execution drug takes 10 minutes to kill US murderer, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် AFP သို့ နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2014 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
63461	8 ယူနိုက်တက်စတိတ်
← 10 သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှု Boost ရန်ရိုးရှင်းသောသိကောင်းစရာများ အစဉ်အဆက်ကိုသန်းပိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့စီးကရက်, အမေရိကန်အစီရင်ခံစာသတိပေး →